Fransiisku wuxuu Wakaaladda ilaalinta xudduudaha & Xeebaha Yurub (Frontex) ugu baaqday inay la dagaalanto socotada aan sharciga ahayn. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Fransiisku wuxuu Wakaaladda ilaalinta xudduudaha & Xeebaha Yurub (Frontex) ugu baaqday inay...
Fransiisku wuxuu Wakaaladda ilaalinta xudduudaha & Xeebaha Yurub (Frontex) ugu baaqday inay la dagaalanto socotada aan sharciga ahayn.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska, Gerald Darmanin, ayaa sheegay Sabtidii mar uu booqanayey Calais oo waqooyiga Faransiiska ah, inuu hay’adda “Frontex” ka codsanayo inay la socoto xuduudaha dibadda ka ah dalalka Midowga Yurub si looga war hayo loolana dagaallamo socdaalayaasha aan sharciga ahayn.
Darmanin oo shirk jaraa’id ku qabtay dekedda Calais ayaa yiri “Waxaan shaqsi ahaan ka codsaday hay’adda ilaalada xuduudaha Yurub, oo hadda aad u danaynaysa koonfurta Yurub, inay ilaaliso waqooyiga Yurub, gaar ahaan xeebaha Nord-Pas-deaux.” Maxaayeelay muhaajiriinta ayaa doonaya inay ka gudbaan kinaalka Calais si ay u gaadhaan England..
Wuxuu intaas ku daray in “60% tahriibayaasha halkaan imanaya ay ka yimaadeen Beljam, sidaa darteed baaxadda shaqadeenu waa inay ahaataa mid aad u ballaadhan, sidaa oo kale waxaan u baahanahay in la xakameeyo hawada Yurub.”
Waxaa xusid mudan in iskudayada muhaajiriinta aan sharciga ahayn ee ka gudbaya kanaalka Ingriisku ay labanlaabmeen tan iyo dhamaadkii sanadkii 2018, in kasta oo digniino isdaba joog ah laga siiyey maamulayaasha khatarta ka imaankarta darteed, ee ah badnaanta maraakiibta ku safraya waddadan, iyo xoogga biyaha & qabowgooda.
Wasiirku wuxuu soo dhoweeyay heshiiska lagu soo gabagabeeyay Talaadadii la soo dhaafay Ingiriiska, kaasoo lagaga yaboohay maalgashi lacageed oo gaadhaya 62.7 milyan oo yuuro sanadaha 2021 iyo 2022 “si Faransiiska looga caawiyo dhanka diyaargarowga iyo la dagaalanka socdaalayaasha aan sharciga ahayn.”
Faransiisku waxay kaloo ballanqaadeen inay “xoojinayaan joogitaanka ciidamada amniga” ee xeebaheeda. Wuxuu na yiri Darmanin. “Waxaa ku sugan Pas-de-Calais in ka badan shan kun oo booliis iyo jandaranmarii ah, dhamaantoodana waxay u heellan yihiin la dagaallanka soo galootiga sharci darada ah. Waa aanu sii kordhin doonnaa”
Waxaa iyaduna jirta in sanadkii 2020, la diiwaangeliyey in kabadan 9,500 oo safar ama iskuday safar ah. Taasoo afar-goor ka badan tii 2019, sida ay cadeeyeen mas’uuliyiinta Faransiisku.
Af-celinta: Walwaal.com, By: Hassan M. Dhiillood
Previous articleRussia sends two planes full of humanitarian aid to besieged Cuba
Next articleCrypto-based ‘shadow financial market’ spooks regulators